ကမ္ဘာ​ကျော် ရုပ်ရှင် streaming platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Netflix ဟာ ယခု​နှစ်​တွေမှာ ကိုယ်တိုင်ထုတ် ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေနဲ့ K-drama ပရိသတ်​တွေသာမက ရုပ်ရှင်ချစ်သူအားလုံးရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းစားလျက်ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Netflix ရဲ့ K-drama ​တွေဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ဇာတ်ညွှန်းနဲ့ တည်းဖြတ်ထုတ်လုပ်​ရေး​တွေ​ကြောင့် အ​နောက်တိုင်းပရိသတ်​တွေကြားမှာ အထူး​ရေပန်းစားလျက်ရှိပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်​နေ့တုန်းက Netflix ဟာ TUDUM ဆိုတဲ့ fan event တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီပွဲမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှစ်ကုန်နဲ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အစမှာ Netflix က​နေ ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပြသသွားမယ့် ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေကို ထုတ်​ဖော်ပြသခဲ့ပြီး K-drama ချစ်သူ​တွေသာမက Netflix ပရိသတ်​တွေကိုပါ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှား​စေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဇာတ်ကား​တွေက​တော့
“My Name” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ​တော့ Han So Hee, Park Hee Soon, Ahn Bo Hyun, Kim Sang Ho, Lee Hak Joo, Jang Ryul နဲ့ သရုပ်​ဆောင်များစွာပါဝင် သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။
“My Name” ဟာ ​လျှို့ဝှက်​မြေ​အောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု​ရဲ့ လက်အောက်မှာ သူတို့ ခိုင်း​စေတဲ့အတိုင်းလုပ်​ဆောင်ရပြီး ရဲ​တွေကို သတင်း​ပေးအ​နေနဲ့ ကူညီ​ပေး​တဲ့ Yoon Ji Woo ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအ​ကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ​သေဆုံးမှု​နောက်ကွယ်က အမှန်တရားကိုလည်း ​ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစား​နေသူပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို Netflix ရဲ့ နာမည်ကြီး series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Extracurricular” ကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Kim Jin Min က ရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပြီး လာမယ့် ​အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်​နေ့မှာ ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
2. Hellbound (Release: November 19, 2021)
“Hellbound” ဇာတ်လမ်းတွဲကို​တော့ ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်​နေ့မှာ Netflix က​နေ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Yoo Ah In, Kim Hyun Joo, Park Jung Min, Won Jin Ah, Yang Ik Joon, Kim Do Yoon, Kim Shin Rok, Ryu Kyung Soo နဲ့ Lee Re တို့ကပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။
“Train to Busan” ရုပ်ရှင်ကားကြီးရဲ့ ဒါရိုက်တာ Yeon Sang Ho ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက​တော့ ငရဲပြည်က တမန်​​တော်တွေ ရုတ်တရက် လူ့ပြည်ကို ​ရောက်ရှိလာပြီး လူ​တွေကို ငရဲပြည်ကို ပို့​ဆောင်ဖို့ ကြိုးစားတာ​ကြောင့် လူ​တွေက ဒီ​ကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ကြီးကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခုခံသွားမလဲဆိုတာကို အသည်းထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်ရှုရမယ့် သဘာဝလွန်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
“Hellbound” ဟာ Toronto International Film Festival (TIFF) မှာ ပြသသွားမယ့် ပထမဆုံး ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သလို ၂၆ ကြိမ်​မြောက် Busan International Film Festival နဲ့ ၆၅ ကြိမ်​မြောက် BFI London Film Festival တို့မှာလည်း ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
3. The Silent Sea
Bae Doona, Gong Yoo နဲ့ Lee Joon တို့လို ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ သရုပ်​ဆောင်​တွေပါဝင်ထားတဲ့ “The Silent Sea” ဇာတ်လမ်းတွဲက​တော့ ၂၀၇၅ ခုနှစ်ကို ဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန် ကမ္ဘာကြီးမှာ အစာ​ရေစာပြတ်လပ်​မှုနဲ့ ကြုံ​တွေ့ရပြီး အထူးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဟာ Silent Sea လို့​ခေါ်ဆိုတဲ့ လကမ္ဘာ​ပေါ်က ဖျက်သိမ်းထားတဲ့ သု​တေသနစပ်သပ်ခန်းတစ်ခုကို သွား​ရောက်ပြီး နမူနာ​တွေယူ​ဆောင်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ Netflix ဇာတ်လမ်းတွဲအများဆုံးရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် ဒါရိုက်တာ Choi Hang Yong ရဲ့ နာမည်တူ ရုပ်ရှင်ကားကို ဇာတ်လမ်းတွဲအ​နေနဲ့ ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး မင်းသားကြီး Jung Woo Sung က ထုတ်လုပ်​ရေးအပိုင်းကို တာဝန်ယူထားပါတယ်။
“Juvenile Justice” ဇာတ်လမ်းတွဲက​တော့ အရွယ်မ​ရောက်​သေးပဲ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို အလွန်မုန်းတီးတဲ့ အမျိုးသမီးတရားသူကြီးတစ်​ယောက်အ​ကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာလည်း ငယ်ရွယ်စဉ်က ဒီလိုအမှုမျိုးကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး အရွယ်မ​ရောက်​သေးတဲ့ တရားခံ​တွေကို တရားစီရင်တဲ့ တရားရုံးတစ်ခုမှာ တာဝန်ကျခဲ့ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းတစ်​လျှောက် အမျိုးမျိုး​သော အမှု​တွေကို လူငယ်​တွေရဲ့ ဘဝအ​ကြောင်းအရာမျိုးစုံ​တွေ ရင်ဆိုင်ကြုံ​တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး အရွယ်​ရောက်သူတစ်​ယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်လဲဆိုတာကို ရှာ​ဖွေပြီး ဘဝသင်ခန်းစာ​ပေး​သွားမယ့် ဇာတ်ကား​ကောင်း​လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ​ Kim Hye Soo, Kim Moo Yeol, Lee Sung Min နဲ့ Lee Jung Eun တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထားပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလထဲမှာ ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ drama လေးက​တော့ ​webtoon ကို အ​ခြေခံထားတာဖြစ်ပြီး အထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာ မ​မျှော်လင့်ပဲ zombie ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပျံ့နှံ့တဲ့ အ​ခြေအ​နေကို ကြုံ​တွေ့ရပြီး အပြင်မှာရှိတဲ့သူ​တွေက ​ကျောင်းထဲမှာ ပိတ်မိ​နေတဲ့ ​ကျောင်းသား​တွေကို ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ​နေရာကျဉ်းကျဉ်း​လေးထဲမှာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ဖို့ ကြိုးစားကြတဲ့ လူ​တွေရဲ့ စိတ်ပြင်းပြမှုနဲ့ ​​အသက်အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါ ​ပေါ်ထွက်လာတတ်တဲ့ လူ​တွေရဲ့ ပင်ကိုယ်ဗီဇကို ​ပေါ်လွင်​အောင် ပုံ​ဖော်ထားပါတယ်။ သရုပ်​ဆောင်​တွေအ​နေနဲ့က​တော့ Yoon Chan Young, Park Ji Hoo, Cho Yi Hyun, Lomon နဲ့ Yoo In Soo တို့ပါဝင်ပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလထဲမှာ Netflix က​နေ ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
“Love and Leashes” ဇာတ်လမ်းတွဲက​တော့ ထူးခြားတဲ့ အကြိုက်ရှိတဲ့ ​ကောင်​လေးတစ်ဦးနဲ့ အဲ့ဒီ​ကောင်​​လေးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို မ​ရည်ရွယ်ပဲ သိရှိသွားတဲ့ ​ကောင်မ​လေးတစ်ဦးတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာဆိုရင် Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင် Seohyun က အလုပ်မှန်သမျှကို ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်​ဆောင်နိုင်တဲ့ PR ဝန်ထမ်း Jung Ji Woo အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး UKISS အဖွဲ့ဝင် Lee Jun Young က သူ့ရဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အသွင်အပြင်​ကြောင့် မိန်းက​လေးဝန်ထမ်း​တွေကြားမှာ ​ရေပန်းစား​ပေမဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်များတဲ့ Jung Ji Hoo ဆိုသူအဖြစ် သရုပ်​ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို​တော့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ​ဖေ​ဖော်ဝါရီလမှာ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Next “Squid Game” သာ Idol တွေကစားဖြစ်ရင် သူများတွေထက်နိုင်အောင်ကစားကြမဲ့ Idol (10) ယောက် »
Previous « Kris Wu ကြောင့်လို့ နာမည်တပ်ရင်း အရူးအမူး‌ပံ့ပိုးကြတဲ့ Fan တွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ လုပ်ဆောင်နေ
တီတီတာတာ စကားလေးတွေဆိုရင်း ပရိသတ်တွေနဲ့ Twitter မှာ အလွမ်းသယ်ခဲ့တဲ့ Baekhyunee
ထုတ်ပြန်ချက်ထွက်လာတဲ့ Top (30) Brand Reputation စာရင်းဝင် နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်များ
Ahgasae ​တွေအတွက် ပထမဆုံး တစ်ကိုယ်​တော် fan meeting ကို ပြုလုပ်သွားမယ့် GOT7 အဖွဲ့ဝင် JAY B